राजा ज्ञानेन्द्रले आफैँ छाडे नागार्जुन दरबार - Janadesh Khabar
नेताहरूले भन्न छाडेका छैनन्– नागार्जुन दरबारबाट पनि निकाल्छौं
‘नागार्जुन दरबारमै रहेको बेला कसैलाई थाहै नदिई राजा वीरेन्द्र बेपत्ता भए। नागार्जुनबाट गाडी ड्राइभ गरी रातारात त्रिशुली पुगे। राजा बेपत्ता भएपछि नागार्जुन र नारायणहिटी दुबैतिर हल्लीखल्ली मच्चियो। सेनाले देशभरिका ब्यारेकमा ‘स्ट्याण्ड टु’ जारी गर्यो।’
गाडी चढ्नुअघि पूर्व बडामहारानी कोमल एकाएक भावुक बनिन्। उनका आँखाबाट आँसु झरे। पति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सम्झाए, मुटु बलियो पार्न भने। पति ज्ञानेन्द्रले सम्झाएपछि १३ वर्षअघि २९ जेठ २०६५ को साँझ नारायणहिटी राजदरबारबाट बाहिर निस्कँदा पूर्व बडामहारानी कोमलको अनुहारमा सन्ताप देखिँदैनथ्यो।
राजतन्त्र समाप्त भएपछि ज्ञानेन्द्र के गर्लान् ? जीवित छँदै गद्दी त्यागेका श्री ३ जुद्ध शमशेर वा पद्म शमशेर झैँ भारततिर वा बेलायततिर पो भासिएलान् कि ? यस्तो अनुमानहरुको खण्डन उनले नारायणहिटी छाड्नुअघिको पत्रकार सम्मेलनमै गरिसकेका थिए।
‘जनताको चाहना र इच्छालाई नै सर्वोपरि मान्ने राज परम्परा अनुसार संविधान सभाको निर्वाचन र जेठ १५ २०६५ गते संविधान सभाको बैठकले गरेको निर्णयलाई सहज बनाउन मैले सहायोगीको भूमिका निर्वाह गरेको छु’, त्यो पत्रकार सम्मेलनमा लिखित भाषण वाचन गर्दै ज्ञानेन्द्रले भनेका थिए, ‘मैले देश छाडेर जाने सोचाई बनाएको छैन।’
गणतन्त्र स्थापना भएको १४ दिनपछि २९ जेठ २०६५ को साँझ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले श्रीपेच र राजदण्डसमेत नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाएर यसैगरी सधैँका लागि नारायणहिटी छाडेका थिए। त्यसअघि नै सरकारले उनको बसोबासका लागि नागार्जुन दरबार उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको थियो। त्यो दिन नारायणहिटीबाट सिधै उनी नागार्जुन पुगे। र, गणतन्त्रपछिका ७ वर्ष अधिकांश समय पूर्व राजा शाह नागार्जुन दरबारमै रहे। छोरा पारस सिङ्गापुर–थाइल्याण्ड बसेको बेला पूर्व राजदम्पत्ति कहिलेकाहीँ निर्मल निवास झर्थे। पारस यतै रहेका बेला प्रायः नागार्जुनमै रहन्थे।
झ्याउँकिरीको संगीतमय आवाज सुन्न पाइने वर्षातमा मात्र होइन, जाडोमा समेत वीरेन्द्र अक्सर नागार्जुनमै रहन्थे।
बायाँतर्फको ‘शरदबास’ र दायाँतर्फको अर्को बिल्डिङको बीचबाट अघि बढेपछि दक्षिण–पश्चिमीतर्फ ओरालो झर्ने बाटो आउँछ। बाटोमा ढुङ्गा छापिएका छन्। करिब २५ मिटर ओरालो ओर्लेपछि त्यो सानो बाटो दुईतिर फाट्छ। त्यसमध्ये एउटा हाँगो पूर्व राजाको कार्यालय रहेको ‘शिशिरबास’ नामको बिल्डिङतर्फ लाग्छ, दोस्रो बाटो दरबारको मूल बिल्डिङको रुपमा रहेको ‘हेमन्तबास’ तर्फ। दोस्रो बाटोबाट ‘हेमन्तबास’ पुग्न सानो ‘कटेज स्टाइल’ को द्वार गेट पार गर्नुपर्छ।
राजा महेन्द्रको पहिलो विवाह जुद्ध शमशेरकै नातिनी हरि शमशेरकी छोरी इन्द्र राज्यलक्ष्मीसँग भएको थियो। २००६ मा प्रसुती व्यथाले उनको निधन भएपछि स्व इन्द्रकै बहिनी रञ्जना राणा ९रत्न राज्यलक्ष्मी० सँग तत्कालिन युवराज महेन्द्रको दोस्रो विवाह भयो। पिता त्रिभुवनको असहमतिका बीच सीमित सहयोगीका साथ नागार्जुन पुगेर युवराज महेन्द्रले २००९ मंसिरमा रत्नसँग विहे गरेका थिए।
नारायणहिटी निर्माण गरेपछि राजा महेन्द्रले दरबारका कोठा र हलहरुको नामाकरण अञ्चल र जिल्लाहरुको नाममा गरेका थिए। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका कोठाहरु अहिलेपनि पुराना अञ्चल र जिल्लाहरुको नाममा छँदैछन्। राजा वीरेन्द्रले चाहिँ नागार्जुन दरबारभित्रका पाँच भवनहलाई पाँच वटा ऋतु हेमन्त, गृष्म, वर्षा, शरद, शिशिर को नाम दिए।
‘शिशिर’ बिल्डिङको छेउतिरको भाग अर्ध गोलाकार देखिन्छ। छेउतिरको जमिन साँघुरो भएकाले जमिन अनुसार भवनको आकार मिलाउन यस्तो गरिएको देखिन्छ।
‘हेमन्तबास’ को पछिल्तिर दुई वटा लामा, तर एक तले बिल्डिङ छन्। तीमध्ये बायाँतर्फको बिल्डिङको नाम ‘वर्षा’ हो भने दायाँतर्फको ‘गृष्म’। यी दुईमध्ये एउटा अधिराजकुमारी श्रुति र अधिराजकुमार निराजनका लागि निर्माण गरिएको थियो, अर्को युवराज दीपेन्द्रका लागि। तर, उमेर पुगे ९२० वर्ष० पछि युवराज बाबु–आमा ९९राजा–रानी० सँगै बस्ने चलन नभएकाले दीपेन्द्र नागार्जुनमा बस्ने गरी हम्मेसी जाँदैनथे। गएका बेला चाहिँ ‘हेमन्तबास’ मा बस्थे।
ढुङ्गानाले भनेजस्तै, नागार्जुनका झ्याउँकिरीका आवाज अन्यत्रका भन्दा चर्को हुने गर्थ्यो। यसको महसुस लेखक नारायण वाग्लेले पनि गरेका छन्।
सात वर्षअघि उनी साथीहरुका साथ नागार्जुन जंगल घुम्न गए। त्यसपछि सेतोपाटी अनलाइनमा लेखिएको ‘कफी गफ’मा वाग्लेले भनेका छन्, ‘झ्याउँकिरीको एकोहोरो आवाजभित्र घना जंगलका सबै प्रकार र आकारका चरा, कीरा, जनावरको गतिविधि निस्तेज थियो। मानौँ, जंगलमा फेददेखि टुप्पासम्म झयाउँकिरीबाहेक केही छैन। त्यहाँ त्यो विशेष कीराको एकल सत्ता स्थापित भएको छ।’
स्वास्थ्य लाभका लागि पनि उनी नागार्जुन नै पुग्थे। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला जापान भ्रमणमा गएका बेला ९ कात्तिक २०५५ मा राजा वीरेन्द्रलाई ‘हर्टअट्याक’ भयो। यो उनको जीवनको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य समस्या थियो। उपचारका लागि देश–विदेशबाट नामी डाक्टरहरु नेपाल झिकाइए। तीन हप्तापछि १ मंसिरमा उपचारका लागि बेलायत प्रस्थान गरे। र, चार हप्ता बेलायतमा बिताएर २ मंसिर ९२०५५० मा काठमाडौँ फर्के।
‘बेलायत प्रस्थान गर्नुअघि र बेलायतबाट फर्केपछि पनि उहाँ नागार्जुनमै रहनु भयो’, ढुङ्गाना भन्छन्, ‘मात्र फरक के थियो भने, पहिले उहाँ ‘हेमन्तबास’ रहनुहुन्थ्यो, तर त्यहाँ पुग्न ओरालो झर्नुपर्ने भएकाले केही समय ‘शरदबास’ पाहुनाका लागि बनाइएको बिल्डिङ मा रहन थाल्नुभयो।’
बिसं १९९० को भूकम्पले नारायणहिटी राजदरबारमा ठूलो क्षति पुर्यायो, भूकम्पमा राजा त्रिभुवनका दुई छोरीले ज्यान गुमाए। २०७२ बैशाखको भूकम्पले नारायणहिटी परिसरका राणाकालिन दरबारहरु भत्के। तर मूल भवनलाई भूकम्पले खासै क्षति पु¥याएन। पूर्व राष्ट्राध्यक्षका हैसियतमा नेपाल सरकारले अस्थायी बसोबासका लागि ज्ञानेन्द्रलााई उपलब्ध गराएको नागार्जुन दरबारमा भने निकै क्षति पुर्यायो।
भूकम्पले ‘हेमन्तबास’ लाई कति क्षति पुर्याएको छ, त्यो बाहिरबाटै हेर्दा प्रष्टसँग देखिन्छ। बिल्डिङको अगाडिको भित्ता नराम्ररी चर्किएका छन्। झ्याल–ढोकाका अधिकांश सिसा फुटेका छन्। फुटेका सिसाबाट चियाएर हेर्दा भित्री भाग अझ नाजुक देखिन्छ। बताइए अनुसार, पूर्व राजारानीको बेडरुम र अन्य कोठाहरुमा पनि क्षति पुगेका छ। पानी र विजुलीको सिष्टम बिग्रिएको छ। बिल्डिङको उत्तर–दक्षिण ९भीर० तर्फको ‘वाल’ ढल्नै लागेको छ। यस्तै स्थिति ‘शिशिरबास’ को पनि छ। त्यहाँको बरण्डा र मूल भवन जोड्ने बिम चर्केर धराप बनेको छ। जुनसुकै बेला बिम खसेर क्षति पुर्याउन सक्छ।
नारायणहिटी छाड्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले नागार्जुन दरबार पूर्व राजा शाहलाई ‘बसोबासका लागि उपलब्ध गराउने’ निर्णयमात्रै गरेको थियो। उनैलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भने गरिएन। कति समयका लागि उपलब्ध गराइएको हो, त्यससम्बन्धी निर्णय पनि भएन। बरु देशमा देखा परेका विसंगतिविरुद्ध पूर्व राजाले थोरैमात्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे भनेपनि उनलाई दिइएको यो ‘सुविधा खोसिदिने’ सार्वजनिक धम्की शीर्ष नेताहरुले दिन्थे। उनीहरुको धम्कीको संकेत ‘आफूहरुको विरोध गरे उनलाई पूर्व राजा नागार्जुन दरबारबाट हटाइन्छ’ भन्ने थियो। नेताहरुको सनकमा कतिबेला हट्नु पर्ने हो, यस्तोमा उनले दरबारबारे आफैँ निर्णय गर्ने कुरा पनि भएन।
गणतन्त्र स्थापनापछिका यस्तै सुख–दुख, आरोह–अवरोहका बीच १२ वैशाख ९०७२० मा भूकम्प आयो, त्यसले नागार्जुन दरबारमा पनि विनास ल्यायो। राज्यको सम्पत्ति भएकाले सरकारले नागार्जुन दरबारको पनि पुनर्निर्माण छिट्टै गर्ला भन्ने अपेक्षा पूर्व राजाको थियो। तर, सरकारको प्राथमिकतामा नागार्जुन दरबारको पुनर्निर्माण कहिल्यै परेन।
‘सरकारले पूर्व राजपरिवारबाट जबर्जस्ती हडपेको सम्पत्ति हो त्यो’, संवादसचिव डा। पाठक भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो सम्पत्ति हो भनेपछि त्यसको संरक्षण सरकारले नै गर्नुपर्ने होला। यस्तोमा सरकार ९पूर्व राजा० बाट आफैँ निर्णय गरेर कुनै कदम चाल्न मिल्छ ररु’
३० जेठ २०७८, आइतवार ०९:०७ बजे प्रकाशित